धन्वन्तरी जयन्ती: के हो आयुर्वेद ? यस्तो छ नेपालमा इतिहास | Hamro Doctor News
धन्वन्तरी जयन्ती: के हो आयुर्वेद ? यस्तो छ नेपालमा इतिहास
काठमाडौंको अनामनगरस्थित सिंहदरबार वैद्यखाना मुलुकको एकमात्र सरकारी आयुर्वे्दिक औषधि उत्पादन गर्ने उद्योग हो । उसले आयुर्वेदसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण परामर्श निःशुल्क दिने गरेको छ । वैद्यखानालाई व्यवस्थित बनाउन औषधि व्यवस्था विभाग, आयुर्वेदिक विभाग तथा उत्पादक संस्थाको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । वैद्यखानाका आयुर्वे्दिक औषधिको माग बजारमा अत्यधिक भए पनि वैद्यखानाले पूर्ति गर्न सकेको छैन ।
आयुर्वेद औषधि उद्योग बढ्दै
आयुर्वे्दिक औषधिको बढ्दो मागसँगै स्वदेशी कम्पनीको संख्या पनि बढिरहेको छ । नेपालमा हाल करिब ८० वटा आयुर्वे्दिक औषधि कम्पनी उत्पादनका लागि दर्ता गरिसकेका छन् । यसमध्ये ४२ कम्पनीले आफ्नो उत्पादन बजारमा पठाएका छन् । केही वर्षअघिसम्म अधिकांश आयुवेर्दिक औषधि भारतबाट आयात हुँदै आएको थियो । तर, अहिले कुल मागको २५ प्रतिशत औषधि नेपाली कम्पनीबाटै उत्पादन हुन थालेको आयुर्वेद चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. प्रकाश ज्ञवालीले बताए । शास्त्रीय प्रणाली (आयुर्वे्दिक प्राचीन ग्रन्थमा दिइएको) बाट उत्पादित आयुर्वे्दिक औषधिको माग नेपालमा मात्र नभई विश्व बजारमा समेत बढेको छ । तर, नेपाली कम्पनीले ठूलो मात्रामा औषधि उत्पादन गर्न सकेका छैनन् । हाल नेपालको कुल मागको करिब २५ प्रतिशत औषधि नेपाली कम्पनी उत्पादन गर्दै आएका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि माग बढ्दो
अहिले पनि हामी आयुर्वे्दिक औषधिका लागि भारतकै भर पर्नुपरेको छ । त्यसैले लगानीका लागि आयुर्वेद औषधि उत्पादन ठूलो सम्भावनाको क्षेत्रका रूपमा रहेको छ । एलोपेथिकका तुलनामा आयुर्वे्दिक औषधिको ‘साइड इफेक्ट’ कम हुने भएकैले पछिल्लो समय युरोप तथा अमेरिकी मुलुकमा समेत आयुर्वे्दिक औषधिको प्रयोग बढ्दै गएको डा. ज्ञवालीको भनाइ छ । परम्परागत ढंगबाट सञ्चालन हुँदै आएका आयुर्वेदिक औषधि कम्पनीले पछिल्लो समय आधुनिक प्रणाली अपनाउन थालेसँगै विदेश निर्यात पनि बढेको छ । नेपालबाट युरोपका विभिन्न देशमा करिब ३० भन्दा बढी प्रकारका जडीबुटीजन्य सुगन्धित तेल र जडीबुटीजन्य उत्पादन निर्यात भइरहेको छ ।
कच्चा पदार्थको कठिनाइ
आयर्वेदको तीन स्रोत रहेको छ । वनस्पतिजन्य, प्राणीजन्य र खनिजजन्य । नेपालमा स्थापित कतिपय आयुर्वे्दिक औषधि उद्योगले अहिले पनि भारतबाट कच्चा पदार्थ ल्याउने गरेका छन् । उता, नेपालबाट भने ठूलो परिमाणमा जडीबुटी विदेश निर्यात भइरहेको छ । नेपालबाट सबैभन्दा बढी चीनमा जडीबुटी निर्यात हुने गरेको छ ।
कच्चा पदार्थका लागि सरकारले के गर्यो ?
आर्थिक वर्ष २०७३र०७४ को बजेटमा जडीबुटी एवम् गैरकाष्ठ प्रजातिको उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणका लागि पकेट क्षेत्र निर्धारण गरिने, कर्णालीलगायतका विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रमा पाइने टिमुर, लप्सी, लौठसल्ला, बोधिचित्त, रुद्राक्ष, तेजपात, अर्गेली, च्युरी, चिराइतो, श्रीखण्ड र मेन्थाजस्ता विशेषप्रकारका जडीबुटीको व्यावसायिक उत्पादन वृद्धि गर्न किसानलाई ज्ञान, सीप, प्रविधि र अनुदान उपलब्ध गराइने र यी सबै कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको अर्थमन्त्रीले घोषणा गरेका थिए । तर, अझैसम्म कर्णालीमा जडीबुटी कुहिरहेका छन् । प्राकृतिक जडीबुटीको अत्यधिक दोहन भइरहेको छ । उदाहरणकै लागि हेर्ने हो भने यार्सागुम्बाको चोरी निकासी तथा अव्यवस्थित संकलनलाई हेर्न सकिन्छ ।
आयुर्वेदको विकास र जडीबुटीको प्रवद्र्धन कागज र भाषणमा मात्र सीमित भइरहेको छ । जसबाट आयुर्वेद चिकित्सा क्षेत्रमा काम गरिरहेका निजी क्षेत्र समेतमा नैराश्य छाएको छ । देशबाट जडीबुटी अवैध रूपमा सस्तोमा बिदेसिन्छ र ती जडीबुटीबाटै बनेका औषधि ी महँगोमा विदेशबाट आयात गरी सेवन गर्न हामी बाध्य छौं । आमसर्वसाधारणको आयुर्वेदप्रति चासो छ तर सरकार, आयुर्वेद स्वास्थकर्मी, आयुर्वेदका क्षेत्रमा काम गर्ने संघ–संस्था जनताको चाहनाबमोजिम आयुर्वेदको क्षेत्रलाई फराकिलो बनाउन सकिरहेका छैनन् ।
आयुर्वेदको उपचार आधुनिक चिकित्साविज्ञानभन्दा फरक छ । सबै औषधि जडीबुटीबाट बनाइन्छ । हरेक रोगको उपचारमा प्रयोग हुने औषधि, रोगका कारण र बिरामीको अवस्थाअनुसार फरक–फरक हुन्छन् । त्यसैले कुनै पनि आयुर्वे्दिक उपचारका लागि आयुर्वेदका डाक्टरलाई जँचाएर मात्र उपचार गर्नुपर्ने द्रव्यगुण विज्ञान विशेषज्ञ प्रा.डा. श्याममणि अधिकारीले बताए । बजारमा पाइने तयारी आयुर्वे्दिक औषधि आफूखुसी सेवन गर्नु हानिकारक हुने अधिकारीको जिकिर छ । त्यसैले जथाभावी आयुर्वे्दिक नाम सुन्नेबित्तिकै औषधि सेवन नगरौं । चिकित्सकको सल्लाहमा मात्र आयुर्वे्दिक औषधि सेवन आयोग्य जीवनका लागि लाभदायक हुने प्रा.डा. अधिकारीको ठहर छ ।
Last modified on 2018-11-06 06:35:28